မောင်းတောမှာ ရဲ၂ယောက်သေသွားတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မောင်းတောမှာ ရဲ၂ယောက်သေသွားတယ်
Posted by chityimhtoo on Jun 8, 2012 in News | 19 comments
ဘူးသီးတောင်မောင်းတောမှာ ကုလားတွေ ရွာ၂ရွာကိုမီးရှိူ့ပြီး တည်းခိုခန်းတွေကိုမီးရှိူ့နေတယ်ကြားတယ်။ပစ်တဲ့ ရဲ၂ယောက်တောင်သေသွားတယ်လို့ပြောတယ်။သူကြီးအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့
အို…. သဂျီးရေ ခင်ဗျ …
သများတွေလို သတင်းလေး ဝင်ဖတ်ခွင့်လေးရအောင် ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ပေး
ဒီပို့စ်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ လူ ၄၀ ခန့် အသေအပျောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း
ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကာ.. ဒို့ က လည်း တမြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်လာတဲ့ ငါတို့ ရခိုင်တွေ ဖက် က လို အပ် ရင် ၀င်ခုတ်ဖို့ ငှက်ကြီးတောင်သွေးထားပြီ..ဂျင်ကလိလည်း မှာပြီးပြီ… လာမပြောနဲ့ ကွာမ တရားတာတွေ တရားတာတွေ..
သဂျီး ရေသတင်းတွေဖတ်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဖတ်လို့မရတာလဲ…????????????????????
သူကြီးရေ level 01 cj only ကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါအုံးဗျာ။
သေနတ်ကြီးကိုင်ပြီး သေတယ်ဆိုရင် ဒီလောက်ညံ့တာ သေပစေ။
eleven media face book http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup
http://www.facebook.com/thevoiceweekly တို့က သတင်းတွေက ပို သေချာလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီမှာလည်း သွားဖတ်နိုင်ပါကြောင်း ။
ရိုဟင်ဂျာဖက်ကထွက်တဲ့သတင်းနဲ့.. ပြန့်နေတဲ့သတင်းတွေက. တကယ့်ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေပါ့လား..
ဒါမျိုးက လုပ်ကြံတင်လို့ ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ ပါဘူးနော…။
ယူအက်စ်ဆက်တလိုက်က.. လှမ်းကြည့်.. အကုန်မြင်နေရမယ်ထင်ပါတယ်.
မှားရင်… မှားတဲ့ဖက်.. လူထုယုံကြည်မှု.. အကြီးအကျယ်ပျက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း…
ငါ့စကား နွားရ ပြောနေကြတာထက် ဓာတ်ပုံ (သဂျီးရေ-ဓါတ်ပုံ မဟုတ်ပါ) အထောက်အထားနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လက်လွတ်စပယ် ကိုယ်လိုရာဆွဲရေး နေကြတာတွေကိုဖတ်ရတာ စိတ်ပျက်လှပါတယ်။
Thu Thu ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက တစ်ချိန်က adu lar ပို့ စ်မှာ အယ်ကေဒါး ဘာညာဆိုပြီး
မိန်းကလေးလို ရေးဖူးတယ်ဗျ။ခုတော့ ပြားရာက လုံးနေပြန်ပါပီ။ကြည့်လိမ်ပါ ဆရာရယ်။
အဲဒီပို့စ်လေး သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး.. မောင်ဇော်လေးရာ
မင်းတို့ ကုလားတွေ သောင်းကျန်းနေတာလေ
အခု ရိုဟင်ဂျာလဲ နဲနဲ ပြန်ထိရော
အဲဒါ သူတို့ရဲ့ သောက်ကျင့်…..ပဲ
အဲဒါ သူတို့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ သောက်ကျင့် …. ပဲ
နောက်ပိုင်းမှာ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ပြီး အသံကောင်းပြန်ဟစ်တာ တွေ့ရလိမ့်မယ်….
ရန်သူ … ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ခေါ်တာလဲ ??
ရန်သူ … ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရန်လာလုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုခေါ်တာ…။
ရိုဟင်ဂျာတွေလား သေပလေ့စေ နဲတောင်နဲသေးတယ်….အသံပြဲနဲ့ဒီမှာလာအော်မနေနဲ့…။သူတို့က
လည်းစလုပ်ကြပြီး နဲနဲလေးခံရတော့မှ လာအော်မနေကြနဲ့….မုန်းလွန်းလို့မသနားတော့ဘူး။
အခုအချိန်မှာ ….. လူမျိုးရေး အရေးကြီးနေပါပြီ ။
သီးခံမှုဆိုတာ အတိုင်းတာ တစ်ခုထိပဲ ရှိပါတယ် …. ။ အဲ့ဒီက ဂယက် ရန်ကုန်မှာပါ ရိုက်ခတ်လာခဲ့လျှင် … တောင်းပန်တာတွေ ကြေအေးတာတွေ တွေးနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး ။
အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ ရခိုင်တွေဘက်က ရပ်တည်ပေးတော့မယ် ။
Bamar and Rakine’s blood is fully red. Ready for any battles.